ny vahoakan’i Midongy Atsimo, hoy ny depiote Tovondray Retsanga Brillant De L’or. Nandalovan’ny rotsak’orana koa any an-toerana. Ho an’ireo manao voly vary tsy mbola manara-penitra, vao miakatra ny rano, indrindra iny volana desambra iny, ka tsy mbola voajinja ny vokatra dia sarona ao, hoy ny fanazavany. Ho an’izay manao voly vary an-tanety kosa dia faly fa nahazo orana. Midi-droa ny zava-misy ho anay satria malahelo izay manoloana ny mahazo ny avaratry ny nosy nefa faly koa fa nahazo orana. Ny faritra atsimo moa dia milevin-drano ary mangetaheta ranon’orana ka faly izy rehefa tonga ny orana, hoy hatrany izy.